ITC - Mandalay
About ITC Mandalay
Conventional M.T Operator
CNC M.T Operator
Electrical Fitter Course
Wel, Ele-plating & Sur Treatment
စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)သို့ တက်ရောက်သင်ကြားလိုသုများသည် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလညမ်း နှစ်မျိုးဖြင့် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို ပေးပို့လျှောက်ထား နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ Online မှ လျှောက်ထားခြင်း
သာမန်လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် လျှောက်ထား လိုသူများသည့် လျှောက်လွှာ ပုံစံအား Download ရယူ၍ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ခြင်း စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပြုစုခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက လျှောက်လွှာတင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးရက်/အချိန် မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာ လိပ်စာများသို့ အရောက် ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
စာတိုက်မှ ပေးပို့ခြင်း ချောဖြင့် ပေးပို့ခြင်း များကြောင့် လည်းကောင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လည်းကောင်း သက်မှတ်ရက်/အချိန် ထက်နောက်ကျ ရောက်ရှိလာသည့် လျှောက်လွှာများအား လက်ခံပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Online မှ လျှောက်ထားခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးမှ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)သို့ တက်ရောက်လိုသူ များအနေဖြင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းအား အချိန်ကုန်သက်သာပြီး မှန်ကန် မြန်ဆန်စွာလျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် On-line Entry Service အား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
On-line Entry Service ကို အသုံးပြု၍ သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းကို အဆင့် (၄)ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့် တစ်ဆင့်ချင်းစီတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကိုလည်း pdf ဖိုင်ပုံစံဖြင့် Scan ဖတ်ပြီး ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိကျစွာရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။
အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီတွင် ဖော်ပြထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် On-line Entry Service ကို လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သာမန် လျှောက်လွှာ တင်သည့်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါကလည်း Form Download ကို Click နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် လျှောက်လွှာ Download ပြုလုပ်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာတင်ခြင်း မဆောင်ရွက်မီ သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာအား သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
သင်တန်းဝင် ညွှန်ကြားလွှာ ဖတ်ရှုရန်
သာမန် လျှောက် ထားရန်
1. Form Download
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ ဇေယျာဌာနီလမ်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
On-line မှ လျှောက် ထားရန်
လျှောက်ရန် အဆင့် (၁)
လျှောက်ရန် အဆင့် (၂)
လျှောက်ရန် အဆင့် (၃)
လျှောက်ရန် အဆင့် (၄)
02 63 217
©Copyright~PRO 81 International Co.,Ltd. 2014.